Maamulka Degmada Erar Oo Booqasho ku Tagay Biyo-xidheenka laga dhisay Degmada - Cakaara News
Maamulka Degmada Erar Oo Booqasho ku Tagay Biyo-xidheenka laga dhisay Degmada
Erar( cakaaranews ) Isniin 2da May 2016, Biyo-xidheen wayn oo laga dhisay centerka Casbuli ee degmada Erar ayaa buux dhaafay islamarkaana ay bilaabeen bulshadii aagaas dagnayd inay kafaa’iidaystaan kadib markii raxmadii roobku sifiican uga da’day aagaas.
Gudooiye Kuxigeenka Degmada Erar mudane Saacid Badal oo ay wehelinayaan Madaxa Arrimaha Xisbiga Degmada Erar Mudane Maxamed Dayib Daahir iyo Madaxa Xafiiska Beeraha Degmada Erar mudane Bashiir Xasan ayaa booqasho ku gaadhay goobta uu kuyaalo biyo xidheenku si ay u soo indho indheeyaan cadadka biyaha ah ee galay Biyo xidheenka.
Hadaba Gudoomiye kuxigeenka Degmada Erar mudane Saacid Badal oo uwaramay shabakada wararka ee cakaaranewsayaa sheegay in uu buuxsamay biyo xidheenkii laga dhisay centerka Casbuli ee degmda erar islamarkaana ay bilaabeen abaa-bulkii iyo wacyigalintii dadkii kafaa’iidaysanlahaa. Isagoo xusay in ay arkeen oo ay lakulmeen dad badan oo guda-galay abuurashada beeraha,
Ugudanabyna Gudoomiye kuxigeenka ayaa tilmaamay in shacabka kudhaqan degmada Erar ay uriyaaqeen sida loogu guulaystay hadafkii laga lahaa biyo xidheenka. Taas oo ahayd mid kamida wadooyinka loomarayo kamidho dhalinta qorshaha Kobaca iyo Isbadalka Dhaqaalaha wajigiisa 2aad (GTP2)